I-DAM3 Case Case Circuit Breaker Abakhiqizi & Abahlinzeki - China I-DAM3 Case Case Circuit Breaker Factory
Ukubuka konke kwe-DAM3-160 MCCB Case Case Circuit Breaker Amandla wokulinganisa alinganisiwe we-Dada DAM3-160 case case breaker breaker angafinyelela ku-100V. Le mishini kagesi ifanele amasekhethi wokusabalalisa amandla nge-current eshintshanayo engu-50-60Hz, amandla okusebenza alinganisiwe afinyelela ku-750V, futhi alinganiselwa ukusebenza kwamanje kusuka ku-10A kuya ku-100A. Ukwephula isekethe kudlala indima ebalulekile ekusabalaliseni amandla nasekuvikeleni isekethe nemishini yamandla ekulayisheni ngokweqile, kumasekhethi amafushane, naku ...
Ukubuka konke Okwamanje okulinganisiwe kwe-Dada DAM3-250 case case breaker breaker kungafinyelela ku-250A. Le mishini kagesi ifanele amasekhethi wokusabalalisa amandla nge-current eshintshanayo engu-50-60Hz kanye nesikhathi esisebenzayo esilinganisiwe esiya ku-1000A. Zingasetshenziswa futhi kuma-motors kagesi ukuvikela okungapheli nokulayisha ngokweqile kanye nokuvikelwa ekujikelezeni okufishane nezimo zokungasebenzi. Uma kuqhathaniswa nochungechunge lwe-DAM1, uchungechunge lwe-DAM3 lwenzelwe ivolumu encane, ephakeme ...
Ukubuka konke Okwamanje okulinganisiwe kwe-Dada DAM3-400 breaker circuit breaker kungafinyelela ku-400A. Le mishini kagesi ifanele ukuvikelwa kwamasekethe wokusabalalisa amandla ngokushintshana kwamanje okungu-50-60Hz kanye nokusebenza okulinganisiwe kube ngu-1000A. Zingasetshenziswa futhi kuma-motors kagesi ukuvikela okungapheli nokulayisha ngokweqile kanye nokuvikelwa ekujikelezeni okufishane nezimo zokungasebenzi. Uma kuqhathaniswa nochungechunge lwe-DAM1, uchungechunge lwe-DAM3 lwenzelwe i-smal ...
Ukubuka konke Okwamanje okulinganisiwe kwe-DAM3-1000 case mold breaker breaker kungafika ku-690A, kuvame ukusetshenziselwa isifunda sokusabalalisa amandla ukusabalalisa amandla nokuvikela imishini yamasekethe namandla kusuka kulayishwe ngokweqile, isifunda esifushane, ngaphansi kokulimala kwamandla kagesi, lapho kushintsha khona i-50 yamanje -60Hz, kulinganiswe i-1000A eqondile-yamanje. Uma kuqhathaniswa nochungechunge lwe-DAM1, uchungechunge lwe-DAM3 lwenzelwe ivolumu encane, amandla okuphuka aphezulu, okunikeza ukonga amandla okungcono. Amapharamitha kagesi we-DAM ...
Ukubuka konke Okwamanje okulinganisiwe kwe-Dada DAM3-1600 breaker case breaker breaker kungafinyelela ku-1600A. Le mishini kagesi ifanele ukuvikelwa kwamasekethe wokusabalalisa amandla ngokushintshana kwamanje okungu-50-60Hz kanye nokusebenza okulinganisiwe kube ngu-1000A. Zingasetshenziswa futhi kuma-motors kagesi ukuvikela okungapheli nokulayisha ngokweqile kanye nokuvikelwa ekujikelezeni okufishane nezimo zokungasebenzi. Uma kuqhathaniswa nochungechunge lwe-DAM1, uchungechunge lwe-DAM3 lwenzelwe i-sm ...
Ukubuka konke Okwamanje okulinganisiwe kwe-DAM3-630 case case breaker breaker kungafinyelela ku-630A. Le mishini kagesi ifanele ukuvikelwa kwamasekethe wokusabalalisa amandla ngokushintshana kwamanje okungu-50-60Hz kanye nokusebenza okulinganisiwe okufika ku-1000A. Zingasetshenziswa futhi kuma-motors kagesi ukuvikela okungapheli nokulayisha ngokweqile kanye nokuvikelwa ekujikelezeni okufishane nezimo zokungasebenzi. Ama-breakers wesifunda afaka izici zevolumu encane, b ephezulu ...